वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : May 2008
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ May 31, 2008
'अधिनायकबाद'को संकेत हो या कार्यकर्तालाई ताली पड्काउने 'खुराक' मात्रै?
जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हुँ भन्नेहरुले अलिक सोच-बिचार नगरी बोलेको राम्रो हुन्न, हारेको पिडा होस् वा जितेको उन्माद-दुबै अबश्थामा आफूलाई सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ। विगतका आफ्नै बोलीहरुलाई पनि अलि हेक्का राखेर बोल्दा झन राम्रो हुन्छ।प्रसंग हिजोको माओवादी आमसभाको हो। 'चमत्कार' को कुरा गरेर नथाक्ने कम्युनिष्ट पार्टी माओबादीका नेता प्रचण्डले 'चमत्कार'कै शैलीमा आफू बाहेक अरु सबैका विरुद्ध विष-वमन गरेका रहेछन् र सबै प्रकारका 'धम्की' पनि दिएका रहेछन्। के माओवादीमा यति चाँडै जीतको दम्भ पलाउन थालीसकेको हो र अधिनायकबादको उस्को 'पुरानो' सपना फेरि ब्युँतिएको हो अथवा कार्यकर्ताले ताली पड्काउन् भनेर अलिक चर्का 'खुराक' पस्केका हुन् उनले?उनले अरु दलका बिरुद्ध बोलेका कुरालाई एक हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला, किनभने राजनीतिको नियमै त्यस्तै हो, अरु दलले पनि त्यसै गर्छन्। तर मलाई सबभन्दा चित्त नबुझेको भने उनले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरुलाई दिएको धम्की हो। हुनत उनले कान्तिपुरको मात्रै नाम तोकेका छन् तर उनीहरुले स्विकार गरुन् या नगरुन्, कान्तिपुर स्वतन्त्र र ब्याबसायिक नेपाली सञ्चारमाध्यमको पर्याय हो। यसका नराम्रा पक्षहरु पनि होलान् तर महान नेपाली मिडिया क्रान्तिको शुरुवात हुनुमा कान्तिपुरको पनि ठूलो हात छ। वर्तमान लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि कान्तिपुरको योगदान कुनै पनि दलको भन्दा कम छैन र आगामी दिनहरुमा पनि देशलाई कान्तिपुरजस्तो सशक्त सञ्चार माध्यम अत्याबश्यक छ। बुद्धिमान नेताहरुको कर्तब्य त यो हुन आउँछ कि भविष्यमा कान्तिपुरजस्तै सशक्त सञ्चारगृह अरु दुई-चारवटा पनि खडा हुन् भनेर त्यसै अनुसारको वातावरण तयार गर्ने। देशको सञ्चार-जगत जति बलियो भयो, लोकतन्त्र र हाम्रो नवजात गणतन्त्र पनि त्यत्तिकै स्वस्थ भएर हुर्कन सक्छ। अब देशमा आफ्नो अधिनायकबाद लाद्ने मनशाय छ कसैको भने कुरो बेग्लै हो, किनभने त्यस्ता नियत हुनेहरुले पहिलो प्रहार सञ्चार जगतलाईनै गर्छन्। विश्वको इतिहास हेर्दा अधिनायकबाद त्यस्तै ठाउँमा हावी भएका छन् जहाँ कि त सञ्चार माध्यम सशक्त र विकसितनै थिएनन् अथवा कुनै कारणले नष्ट हुँदै गएका थिए। माओवादीहरुको यस्ता 'धम्की' बढ्न थाल्नु अत्यन्त ठूलो चिन्ताको विषय हो। खतरा कान्तिपुरलाई मात्रै होईन, अरु सबै सञ्चारगृहहरुलाई पनि हो। कान्तिपुरलाई खान खोज्ने 'बाघ'ले मलाई भने खाँदैन भनेर चूप नलागेकै राम्रो। र यो खतरा लोकतन्त्र स्वयंका लागि पनि हो र गणतन्त्रका लागि पनि हो, किनभने उनीहरुको जनगणतन्त्र भनेको राजतन्त्रको अर्को रुप 'श्रीपेच नलगाएको राजतन्त्र' हो। उदाहरण उत्तर कोरीया छ। खतरा देशकै लागि हो, उनीहरुको यो अधिनायकबादी रहरले देशलाई अर्को ठूलो द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट के जानीराखे हुन्छ माओवादी नेताहरुले भने ज्ञानेन्द्र शाहको अधिनायकबादलाई धूलो चटाउने नेपाली जनताले उनीहरुको अधिनायकबादी 'रहर'को पनि सही जवाफ दिनेछन्।वाइसीएलको देशब्यापी आतंकको कान्तिपुरले पहिल्यैदेखि सहि रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ। सञ्चार माध्यमले भएका कुराको रिपोर्टिङ नगरेर के को गर्ने त? अब हामीले जित्यौं, त्यसैले हाम्रो विरोध गर्न पाउँदैनौ कसैले, हामीलाई ढोग सबैले भन्ने आशयले बोल्नु नयाँ नेपालको नेताको रुपमा आफूलाई पेश गरेका ब्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा हो? प्रचण्ड र माओवादीहरुलाई रिस उठेको अर्को कारण भर्खरै उनीहरुका कार्यकर्ताहरुद्वारा गरिएको रामहरि श्रेष्ठको हत्या बारेको ब्यापक रिपोर्टिङ हो भन्ने कुरामा शंका छैन। कान्तिपुरजस्ता सञ्चार माध्यमहरुले यो विषयलाई प्राथमिकता नदिएको भए माओवादीहरुले त्यसै गुपचुप पार्ने थिए यो घटनालाई। यस्ता जघन्य हत्या विगतमा पनि नभएका हैनन् माओवादीबाट, उनीहरु खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पनि भएका छन्। त्यतिखेर माओवादीहरुको जघन्यताको विरोधमा यस्तो माहौल उठ्न सकेन, त्यसैले न त माओवादी नेतृत्वले माफी माग्नु प-यो, न आयोग बनाउनु प-यो, न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कारवाहीको 'नाटक' गर्नुप-यो र न त २० लाखको क्षतिपूर्तिनै दिनुप-यो। यो सबै गर्नुपरेकोमा कान्तिपुरलाई दोष दिएका हुनसक्छन् माओवादीहरुले। तर उनीहरुले हेक्का राख्नुपर्ने कुरो के हो भने कान्तिपुरले जति बिस्तृत रिपोर्टिङ यो घटनाको गरेको छ, त्यत्तिकै विस्तृत रिपोर्टिङ भैरवनाथ गणले गरेको हत्याकाण्ड, मैना सुनुवारको हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको पनि गरेको छ। सबैले आफ्नो गुणगान र जयजयकार मात्रै गरुन् भन्ने चाहना छ भने ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डमा के फरक भयो?त्यतिमात्रै हैन, संविधानसभाको चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएकोले सरकारको नेतृत्व माओवादीलेनै गर्न पाउनुपर्छ भनेर माओवादी आफैंले भन्दा बढी वकालत कान्तिपुरले गरेको छ। माओवादीहरु किन देख्दैनन् यो तथ्यलाई?! चुनावपछिका सम्पादकीयहरुमात्रै हेरपनि हुन्छ, दशवटाभन्दा बढी त माओवादीकै समर्थनमा लेखिएका होलान्। कुनै 'वाद', 'विचारधारा' वा 'पथ'का चश्मा लगाएका आँखाले सन्तुलित विचार देखिन्नन्, चश्मा उतार्नै पर्छ।अर्को एक ठाऊँमा उनले '----माओवादीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । हाम्रो समानुपातिकका कारण कांग्रेस, एमालेको इज्जत रह्यो ।' पनि भनेका रहेछन्। होला, समानुपातिकका कारणलेनै कांग्रेस, एमालेको इज्जत रहेको होला, तर यो समानुपातिक कस्को भनेर कसरी भन्ने? संविधान सभाको चुनाव पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ भनेर पहिला एमालेले प्रस्ताव राखेको होईन र? त्यतिखेर कांग्रेससंग मिलेर माओवादी पूरै प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीको पक्षमा गएको थियो। पछि आफू जित्ने आत्मविश्वाश नभएपछि मंसिरमा हुनुपर्ने चुनाव भाँड्नमात्रै माओवादीले फेरि समानुपातिकको नारा उचालेको थियो। यो कुरा मान्छेहरुले अझै बिर्सिसकेका छैनन् भनेर हेक्का हुनुपर्ने हो प्रचण्डलाई।यस्तरी लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्ला भनेर कांग्रेस र एमालेको दिमागले नसोचेको सही हो तर अर्को सत्य के पनि हो भने यस्तरी 'छप्पर फाड्के' जीत आईलाग्ला भनेर माओवादीले पनि भेउ पाएको थिएन। माओवादी जीतको रन्कोमा छ त्यो बेग्लै कुरो हो तर जनताले सबैका अनुमानलाई हावा खुवाईदिएका हुन्। यत्तिको जीतको भेउ पहिल्यै भए माओवादी न कहिले प्रत्यक्ष- कहिले समानुपातिकको 'पेण्डुलम' बन्नेथियो न त कथित 'राष्ट्रवादी' दरबारीया र पूर्व-पञ्चहरुसंग घाँटी जोड्ने अभियानमा लाग्ने थियो। चुनावअघिको माओवादी हताशा कस्तो थियो भन्ने कुरा यति चाँडै कसैले पनि बिर्सिसकेका छैनन्।वर्तमान नेपाली राजनीतिका 'जीत' र 'हार'का कारणहरु धेरै छन्। तर एउटा पाटोबाट हेर्दा, माओवादीले कांग्रेसलाई धन्यबाद दिए हुन्छ बरु। एमालेविरुद्ध खाल्डो खन्न उसलाई सघाएको कांग्रेसलेनै हो। माओवादी र कांग्रेस दुबैले के सोचे भने एमालेलाई चोइट्याउँदानै आफ्नो फलिफाप हुन्छ, र मिलेर एमाले विरुद्ध खाल्डो खन्न थाले। चुनावी परिणामका लागि धेरथोर त्यो 'खाल्डो'पनि जिम्मेवार छ।यो कुरो बेग्लै हो कि माओवादीसंग मिलेर एमालेलाई पुर्न आफूले खनेको खाल्डोमा कांग्रेस आफैंपनि जाकियो। Posted by
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल-जिन्दाबाद!!!!यो दिनले नेपाललाई एउटा स्वर्णिम युगमा प्रवेश गराओस् भन्ने प्रार्थना गर्दुछ।हामी सबै नेपालीहरुमा हार्दिक बधाई!!
देश कागजी रुपमा अथवा ब्याबहारिक रुपमा पनि गणतन्त्र बन्ने संघारमा आईपुगेको छ। जनताको मनमा गणतन्त्र आईसकेको त धेरै पहिले हो। तर गणतन्त्रको यो पूर्वसन्ध्यामा किताब नपाएर तडपिरहेका विद्यार्थीहरु देख्नुपर्दा मनै अमिलो भएर आउँछ। हाम्रा सबै उत्सवहरुलाई यो घटनाले पक्का पनि फिक्का बनाईदिनेछ। ती विद्यार्थीहरु भनेका यो देशका भविष्य हुन् र अबको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उनीहरुकै लागि हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र संवर्धन तबमात्र संभव हुनेछ जब सडकमा अराजक ढंगले बरालिइरहेका यी विद्यार्थीहरुको असन्तुष्टिको सही ब्यबश्थापन हुनेछ। त्यो असन्तुष्टिको तात्कालिक समाधान यथेष्ट पाठ्य-पुस्तक जतिसक्दो चाँडो बजारमा पु-याउनु हो। पाठ्य-पुस्तक प्रकाशनमा ढिलाई कसरी र किन भयो भन्ने कुराको छानबीन र समीक्षा हुनैपर्छ र जिम्मेवारहरुले गल्ती स्विकार गर्नैपर्छ। संविधान-सभाको मतपत्र छाप्नु परेको आदि-इत्यादि कारणहरु देखाएर ढिला भएको हो भनेर टार्न सक्छन् यो कुरालाई। तर सरकारी प्रेस ब्यस्त हुने भए नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्थ्यो पाठ्य-पुस्तक प्रकाशनको। अझै पनि केहि ठूला नीजि प्रेसहरुलाई केहि अंश छाप्न दिने हो भने केहि दिननै भएपनि चाँडो हुन सक्छ। एउटा उदेकलाग्दो कुरो के भने सरकार र दलहरु कसैले पनि यो समस्यामाथि गम्भिर चिन्तन गरेका छैनन्। सबै गणतन्त्रको धूनमा मस्त छन्। तर स्थिति यहि रहिरहने र यी विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित हुने दिन लम्बिरहने हो भने यीनको मनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मोह पलाउने हैन, उल्टो वितृष्णा जाग्न सक्छ।देशका सबै दलका नेताहरुले एकपटक यी विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन किन नगर्ने र पाठ्य-पुस्तकको अभावको द्रुत अन्त्यको प्रत्याभूति किन नदिने?!
नेपालमा साँच्चिकै सफा दिलले समाजसेवा गरेर वा कार्यरत भएर बसेका विदेशीहरु(पश्चिमाहरु अथवा 'गोरा'हरु, जनबोलीमा) धेरै छन् र ती सम्मानका हकदार छन्। तर नेपालमा रहेका 'गोरा'हरुको अर्को भाग भने कथित समाजसेवा अथवा आफ्नो प्रतिष्ठित 'क्यारीयर'को आडमा नेपाललाई अनगिन्ती अवैध धन्दा र अपराधहरुको खेल-मैदान बनाएर बसेको छ। नेपालीमा रहेको विदेशीप्रतिको आकर्षण र सद्भाव, अनि नेपालका लोभी र भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र प्रशाशकहरुलाई राम्रैसंग 'उपयोग' गरेका छन् यस्ता 'गोरा'हरुले। नेपालमा सामन्यतया यस्ता मान्छेमाथि कारवाही हुँदै-हुँदैन। कुनै कारणवश, कारवाहीको 'नाटक' मञ्चन शुरु भईहाल्यो भनेपनि उच्च तहमा रहेको आफनो 'पहुँच'को आडमा तिनीहरु सजिलै फुत्किन्छन् र फेरि नेपालमै अथवा नेपालजस्तै 'अभागी' तेश्रो विश्वको अर्को कुनै देशमा आफ्ना कर्तुतहरु दोहो-याउन थाल्छन्। कतिपय अबश्थामा उनीहरु आफ्नो देशको कूटनीतिक निकायकै दबाब प्रयोग गरेर पनि फुत्किन्छन्। हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा 'लाजमर्दो' कुरा के हो भने, संसारमा यस्तो कुनै देश बाँकी छैन जस्को उचित-अनुचित दबाबमा नेपाल गल्दैन। हाम्रो देशको कूटनीतिमा अलिकति पनि नैतिक बल हुन्थ्यो भने भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको त्यो दुर्गति हुने थिएन। केहि वर्ष पहिलाको एउटा प्रसंग याद आयो। यूरोपको कुनै देशको एउटा 'गोरा' बालयौन-दुराचारको अभियोगमा समातिएको थियो। खोरबाटै उसले पत्रकारहरुसंग भनेको थियो-"तिमीहरुको देश कसरी चलेको छ भन्ने मलाई थाहा छ। कसैले केहि गर्न सक्दैन मलाई।" नभन्दै केहि दिनपछिनै ऊ रिहा भयो। निकट अतीतका केहि प्रसंगहरु पनि यस्तै छन्। धर्मपुत्र-पुत्रीको 'कारोबार' गर्ने गिरोहको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको कुरा अझै ताजै छ। त्यस्तै, आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब समेत नदिने छिमेकी देशको टेलिभिजन च्यानल चलाउने मान्छेले हाम्रो संचार मन्त्रीलाई "धेरै निहुँ नखोज् है, तेरो 'पोर्टफोलियो' फेर्दिउँला नि फेरि!" भनेर भनेको दुई वर्षपनि पुगेको छैन। थुक्क हामी नेपालीको इज्जत!!!!!!!!यो 'इयान बेकर' भन्ने त अहिले नेपालमै रहेनछ। अब यो 'बेकर' भन्ने नेपाल आउँछ कि आउँदैन कुन्नि! ऊ नेपालै आएपनि हाम्रो सरकार-प्रशाशनले के गर्न सक्ला र? अथवा के गर्न चाहला र? प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई नियमित 'भोज' ख्वाउनेले केहि राजनीतिज्ञहरुलाई पनि केहि न केहि 'चटाएकै' होला। 'बेकर' भन्ने त फुत्किए पनि अलि-अलि बेईज्जत त भयो त्यस्को; सके यो समाचारका कारण उस्को जागिरै 'चेट' होला र जिन्दगीभरको उ्सको प्रतिष्ठा अमेरिकामापनि धूलोमै मिल्ला। तर उस्ले ख्वाएको 'भोज' खाएका हाम्रो देशका प्रहरी-प्रशाशन-राजनीतिका ती पातकीहरु भने सजिलै उम्कनेछन्। कल्ले छुने तिनलाई नेपालमा?! रक्षकनै भक्षक! यो मैले नेपालको प्रहरी-प्रशाशनलाई भनेको होइन, तिनीहरुलाई त भनिरहनै पर्दैन, प्रमाणित कुरो हो। तर यो 'बेकर' भन्ने पनि उस्तै निक्लियो। हामी सबैमा नेशनल ज्योग्राफिक र न्यूजवीकप्रति पक्का पनि धेरैनै विश्वाश छ। झन नेशनल ज्योग्राफिक त विश्वका प्राकृतिक-साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो। यस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको लेखक भएर संरक्षणको साटो त्यो मान्छे उल्टो महातस्कर भएर हिँडिरहेको रहेछ। योभन्दा 'रक्षकनै भक्षक' अरु के हुन सक्छ?!समाचार पढिसक्नुभएको छैन भने यहाँ सूत्रहरु छन्।Police Recover Illegal Treasure Trove from House of National Geographic Writerबाघको छालामा बेकरको रजाईँ
आज फेरि एउटा पुरानो कविता। म पोखरा बस्दा लेखेको हो यो पनि। २०५६-२०५७ सालतिर हुनुपर्छ। ब्लगमा लेख्नका लागि धेरै विषयहरु थिए तर समयले साथ दिएको छैन अचेल। त्यसैले आजपनि "इतिहासको ब्याज" पस्किँदैछु यहाँहरुसामु। खासमा नयाँ कविता नलेखेको पनि धेरै भईसक्यो। अब त कविता 'फुर्न'समेत छोडिसक्यो:)शहरको एक दिनबिहान सबेरै-एक हुल कुकुरहरु आएर सडकमा राशलीला मच्चाईदिन्छन,दिनभरि-नाङ्गो एकलास डाँडोमाआफ्नै छायाँमा गाडिएर एउटा रुख रोइरहन्छ,साँझ परेपछि-अराजक सडकहरुपहाडमा ठोक्किएर चूपचाप घर फर्कन्छन्,र आफ्नै सुरक्षामा खटिएको शहर-आफ्नै आँसुको घोर वर्षामारातभर एक्लै रुझिरहन्छ।
थाहा छैन कसरी साहित्य पढ्ने बानी लाग्यो। हाजिरजवाफहरुमा कहिलेकाहीँ जित्दा पाएका 'बालकोसेली'का केहि अंकहरुले हुनसक्छ अथवा रेडियो नेपालको 'बाल कार्यक्रम'ले पनि हुनसक्छ मलाई शुरुमा त्यतातिर डो-याएको। यी बाहेक प्रेमा शाह आदिले लेखेका बालकथाका पुस्तकहरु पनि हात पर्न थाले। अलि ठूलो भएपछि पढेको 'हमजाएगाको डायरी' को पनि ठूलो प्रभाव हुनसक्छ। गाउँमा पुस्तकालय नभएपनि हामी बालसखाहरुका बीचमा किताब आदान-प्रदान निकै चल्थ्यो र पुस्तकालयको अभावको अलिकति भएपनि पूर्ति गर्थ्यो यसले। पछि विस्तारै साथीहरुका घरमा भएका मधुपर्क र अरु पत्रिकाहरु पनि पढ्न थालियो। घरमै पनि थिए अलि-अलि, तर बढी धार्मिक पुस्तकहरु र त्यो पनि हिन्दीमा। गाउँका कुनै-कुनै घरका बुईंगलमा भेटेर पढेका कति किताबहरुले मनमा पारेको प्रभाव अझै ताजै छ। 'रत्नश्री' भन्ने पत्रिकाको 'दार्जलिङ् कथा विशेषांक' सबैभन्दा बढी सम्झनामा छ। २०३०को दशकका मधुपर्कका बिभिन्न अंकहरुका कथा-कविताहरु, शिकार कथाहरु सबै सम्झना नभएपनि तीनले मनमा पारेको प्रभाव भने अझै महशूश गर्न सक्छु म। गोरखापत्रको 'शनिवासरीय परिशिष्टांक' (अहिले 'शनिवारीय' भनिन्छ क्यारे!) पनि टूपीदेखि पैतालासम्म पूरै पढिन्थ्यो। त्यो जमानामा र त्यो पनि गाउँमा पढ्ने कुरा कमै थिए, भएकाको हामीले 'अधिकतम उपयोग' गरेका थियौं। -२-
लेख्ने बानी पनि लाग्दै गयो। एक‍-दुई पटक भानुजयन्तीमा पुरस्कार हात परेपछि र बाल कार्यक्रमको 'को भन्दा को कम' मा एउटा कविता र एउटा निवन्ध प्रसारण भएपछि हौसला पनि बढ्यो। विद्यालय पढ्दै एकताका 'झण्डै-झण्डै साहित्यिक' दैनिकि पनि चलेको थियो केहि समय। तर रचनाहरु प्रकाशन गर्ने आत्मविश्वाश आईसकेको थिएन, चाहना भने विस्तारै बढ्दै थियो। विद्यार्थी जीवनका भित्ते पत्रिका वा वार्षिक स्मारिका आदिबाहेक प्रकाशनकै लागि भनेर पठाउन थालेको भने बी.ई. सकेर नेपाल फर्केपछिमात्रै हो। 'कान्तिपुर साप्ताहिक' ले एउटा लघुकथा छापिदिएको थियो। पोखरा बस्दा त्यहाँका स्थानीय पत्रिकाहरुले केहि कविता र लेखहरु छापिदिएका थिए। तर लोभ भने राष्ट्रिय पत्रिकामै छपाउने थियो। मधुपर्क, गरिमा, तन्नेरी, गोरखापत्र, कान्तिपुर आदिले छाप्दै छापेनन्। म आफूलाई त्यस्तो 'खतरा' लेखक-कवि त ठान्दिनँ तर मेराभन्दा धेरै स्तरहीन रचनाहरु भने छापिएको देखिन्थ्यो यदाकदा। मेरो घमण्ड पनि हुनसक्थ्यो यो अथवा अरुका रचनालाई मैले नबुझेको पनि हुनसक्थ्यो तर यसपछि पत्रिकहरुमा छपाउने मन मर्दै गयो। सकिएछ भने पछि किताबै छपाउँला भन्ने विचार थियो।
नछपाउने भनेर मन बनाएपछि लेखनको गति कम हुने रहेछ, रोकिनै त रोकिन्न। मान्छेले अरुले पढुन भनेरनै लेख्छ। अरुले नपढुन् भन्ने चाहना लेख्नेमा हुँदै-हुँदैन, ठोकेर भन्दिन्छु म यो। जीवनभरि लुकाएर दैनिकी लेख्नेहरुमा पनि आफू मरेपछि अरुले पढिदिउन् भन्ने चाहना हुन्छ। वस्तवमा अरुले नपढुन् भनेर आफ्नै लागि लेख्ने हो भने लेख्ने आवश्यकतै छैन। त्यो अवधिमा मैले थोरै लेखें, त्यो पनि छोटा कविताहरु, लेख्न भनेर बसेर हैन कि भावनालाई आफैंभित्र धान्न नसक्ने भएपछि मात्रै। तर ती छोटा कविताहरुले असाध्यै सन्तुष्टि दिएका छन् मलाई। -३- जापान आएपछि पनि ताल त्यस्तै थियो। तर विघ्नै नराम्रा कुराहरुले पनि केहि राम्रो शुरुवात गरिदिँदा रहेछन्। अढाइ वर्ष जतिपछिको ज्ञानेन्द्र शाहको कथित 'रचनात्मक प्रजातन्त्र' मेरो लेखनीका लागि सानोतिनो 'वरदान'जस्तै हुनपुग्यो। नेपालसंग फोन र इण्टरनेट सम्बन्ध विच्छेद भएको बेला थियो। अमेरिका बस्ने एउटा साथीसंग च्याटमा कुरा हुँदा उसले मलाई साझाको बारेमा बताएको थियो। त्यसमा हुने केहि राजनीतिक कुराकानीहरुमा त सहभागी भईयोनै तर साझाभित्रको साहित्यले मलाई झन बढी आकर्षित ग-यो। एक-से-एक कवि, कथाकार र लेखकहरु छन् त्यहाँ। त्यतिबेलै नेपाली यूनिकोड पनि 'हात' प-यो र मेरो जीवनको सानोतिनो 'क्रान्ति'को शुरुवात भयो। मेरो मतलब, मैले 'फेरि' लेख्न थालें। यूनिकोडले 'कागजमा लेख्दै-केर्दै-अर्कोमा सार्दै---' को झञ्झटलाई मेटिदियो र साझाले तुरुन्तै प्रतिकृया दिने 'पाठक' पनि मिलाइदियो। 'गोतामेको गनगन' नाममा 'राजनीतिक हाइकू' लेख्थें शुरुमा। पछि 'कविताको देश' भन्ने धागो शुरु भयो। यसले धेरै नयाँ साथीहरु र प्रशंशकहरु दियो मलाई, मैलेपनि धेरै राम्रा कविहरुको संगत पाएँ। केहि कथाहरु पनि लेखें मैले यो ताका। साझा पसेबाटैको 'चौतारी'को सहभागिताले पनि धेरै लेखायो। गाउँले पाराको छेडखान, गफगाफ आदि खुब पढियो-लेखियो। त्यो बेलाको 'चौतारी'को हरेक अंक एकदमै रमाईलो नाटकजस्तो हुन्थ्यो। गजल लेख्ने कुराको आधारभूत जानकारी पाएको पनि साझाबाटै हो मैले, केहि लेखियो पनि। समयाभावले अचेल साझा 'पस्ने' समय एकदम कम भएको छ, नरमाईलो लाग्छ।
त्यो ताका एउटा ब्लग पनि शुरु गरेको थिएँ मैले, ब्लगस्पटमै हो। तीन-चार पोष्टिङसम्म लेखियो, 'राजनीतिक गाली' मात्रै र थन्कियो त्यो ब्लग। त्यसको पाठक पनि मैमात्र थिएँ होला। त्यसको पासवर्ड याद छैन अहिले। विस्तारै इण्टरनेटमा 'आफनै' घर 'बसाउने' सूर चल्यो। लाग्यो किन फेरि ब्लगबाटै शुरु नगर्ने?! केहि महिनाको मन्थनपछि गत सालको मे १९मा यो ब्लग शुरु गरें मैले। शुरुका दुई पोष्टिङलाई धेरै परीवर्तन गरीरहें केहि समय। वास्तवमा शुरुवातमा के राख्दा राम्रो हुन्छ अथवा पहिलो पोष्टिङमा के लेख्ने भन्ने कुराले धेरै समय खाँदो रहेछ, बरु पछि-पछिका लामा-लामा पोष्टिङहरु सजिलै तयार हुन्थे। अब बुझ्नुभयो होला, म मेरो यो ब्लगको 'जन्मदिन'को बारेमा कुरा गर्दैछु, मेरो आफ्नो हैन। आज यो एक वर्ष पूरा भयो। एक वर्षसम्म तन्काउन सकेकोमा म आफैंलाई पनि बधाई दिन्छु, किनभने कतिचोटि 'बेकारको बोझ थपिएछ जिन्दगीलाई----' भन्ने लागेको थियो। यो ब्लग मेटेर आनन्दले बस्छु र झुक्केर पनि अर्को ब्लग शुरु गर्दिन भन्ने विचार धेरै चोटि आएको थियो। ब्लगमा लेख्न थालेपछि एक किसिमको दायित्वबोधजस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। केहि दिन लेख्ने समय नमिलेपछि छटपटी बढ्दै जाँदो रहेछ, आफैंलाई र अरु केहि मानिसलाई पनि धोका दिएजस्तो लाग्दो रहेछ। -४- ब्लगले धेरै नयाँ साथीहरु र पाठकहरु त दिएकै छ, 'केहि न केहि त लेखिएकै छ' भन्ने आत्मसन्तुष्टि पनि दिएको छ। पेशाको हिसाबले बिल्कूल फरक बाटोमा हिँडेको हुनाले 'लेख्ने' कुरालाई आफूले चाहेजति समय दिन सकेको छैन, लेख्न चाहेका धेरै कुराहरु मनमै छन्, कति मनमै बिलाईसके। वर्षौंदेखि दशौं कथा र निवन्धहरुको 'प्लट' मनमा बोकेर हिँडिरहेको छु। कुनैदिन 'पूर्णकालीन' लेखक बन्ने धोको छ मनमा।
सामन्यतया नेपालीमै लेख्ने मेरो शुरुदेखिकै विचार हुनाले मेरो सम्पर्क पनि प्राय: नेपाली ब्लगरहरुसंग मात्रै छ। मैले यो ब्लगमा सूत्र राखेका ब्लगहरु (FRIENDS) म नियमित रुपमा पढ्छु। अरु नेपाली ब्लगहरु पनि पढ्छु धेरैनै। एककिसिमले मेरो अध्ययन अहिले बिभिन्न ब्लगहरु (प्रायश: नेपालीका) र कान्तिपुरमा सीमित भएको छ। यो ब्लग शुरु गरुञ्जेलसम्म पनि मलाई ब्लगस्पटको बारेमा मात्रै जानकारी थियो। अहिले बुझ्दा लाग्छ, वर्डप्रेस धेरै राम्रो र प्रणालीबध्द' छ यो भन्दा। अब वर्डप्रेसमै लेखौंकि भन्ने पनि लाग्दैछ, तर यसमा यति लामो बाटो हिँडिसकियो, एक किसिमको 'आत्मीयता' बनिसकेको छ यो संग भनेर ब्लगस्पट छोड्न सकेको छैन अझै।
एन.आर.एन. को अधिवेशन जात्रा:राष्ट्रियताको घोर बेइज्जतीको एक दिन-४
भिडका केहि फोटोहरु यहाँ राखिएका छन्। केहि फोटोहरु मित्र प्रताप छत्कुलीबाट प्राप्त भएका हुन्। उहाँलाई धन्यबाद।हल परिसरमा सुन्दर फूलहरु फूलिरहेका थिए। केहि नेपालीहरु 'निर्दयी' पाराले फूलमा टेकिरहेका थिए, कोहि बसिरहेका थिए। दिनभरि उभिँदा थकाई लागेर बसेका भनौं भने सबैनै थाकेका थिए। अलिकति मात्रै चेतना भए मान्छेहरु त्यसरी बस्ने थिएनन्।चुनाव हुने-नहुने अथवा कुन ढंगले हुने हो निश्चित थिएन। वातावरण झन-झन तनावमय हुँदै थियो। मतदाता नामावलीमा अझै मतैक्यता हुन सकेको थिएन शायद। साढे तीन बजेपछि होला, मतदाता नामवाली ल्याएर टाँसियो हलको मूलढोकाको दुईतिर। त्यसपछि मतदाताहरु लाईन लागे। अलिक ध्यान दिएर हेर्दा मतादात नामावली पनि 'गज्जब' देखियो। एउटै मान्छेको नाम धेरै ठाऊँमा पनि देखिन्थ्यो। एउटै नामको अगडि कहिले Mr. कहिले Ms. देखिन्थ्यो। टोकियोमा आएर लोग्नेमान्छेको middle name, kumari पनि हुन्छ भन्ने जान्न पाईयो:) केहि उदाहरणहरु छन् यहाँ, आनन्द लिनुस्। भिडको टाउकोमाथीबाट मोबाइलले धेरै खिच्न सकिएन। यिनैको भरमा पनि तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ, मतदाता सूचि कति हचुवाको भरमा बनाईएको थियो। मतदाताको लाईन एकदम भद्रगोल देखिन्थ्यो। एनआरएनका स्वयंसेवकहरु बाहिर देखिएका थिएनन्। हामीसंग बिल्कूल सम्बन्ध नभएका केहि जापानी कर्मचारीहरु हाम्रा 'मतदाता'को लाइनलाई मिलाउँदै र सोझ्याउँदै थिए! 'हग्ने'लाई भन्दा 'देख्ने'लाई लाज! त्यतिखेरसम्म के स्पष्ट भईसकेको थियो भने अब सदस्यताको बाल मतलब हुने छैन र जस्ले पनि भोट हाल्न पाउनेछ। मलाई यस्तो काइते चुनावमा भोट हालेर आफ्नो हात 'फोहर' गर्न मन लागेन र जो साथीका लागि म टोकियो आएको थिएँ उहाँलाई सोधें, चुनावप्रति उहाँको राय के छ र भोट हालौं कि नहालौं भनेर। उहाँले भोट हाल्ने अनुरोध गरेपछि बेलुकी सात बज्ने बेलामा लाइनमा बसें।भित्र मतदान गर्ने ठाऊँमा पनि कम्ता भिडभाड थिएन। तलका फोटोहरुबाट देख्न सक्नुहुन्छ। को भोट हालीसकेको हो र को भोट हाल्न जाँदैछ, पत्तै हुँदैन थियो। यस्तो भिडभाडमा गोप्यताको के अर्थ रह्यो?! कस्ले कस्लाई भोट हाले भनेर स्टेजमा बसेका केहि ब्यक्तिले सजिलै हेर्न सक्थे।यो एउटा सामान्य मतदाताको अनुभव हो। यो चुनावसंग अझ नजिक सम्बन्ध भएका साथीहरुका धारणा तपाईँ http://www.samudrapari.com, http://www.lokatantra.blogspot.com र http://thenewah.blogsome.com आदिमा पढ्न सक्नुहुन्छ।यो अनुभवपछि म एनआरएनको साधारण सदस्यता पनि परित्याग गर्ने निर्णयमा पुगेको छु। लेख्न भने एनआरएनको बारेमा पछि पनि लेख्दै गरौंला। अहिलेलाई यो शृंखलालाई समाप्त पार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यबाद!अरु भागहरु:भाग-१भाग-२भाग-३
कार्यक्रम शुरु भएपछि भाषण सुनियो एकछिन। र पेटमा मूसा दौडिन थालिसकेकोले केहि साथीहरुसंग बाहिर लागियो। खाना खाएर फर्केर आउँदा केहि साथीहरुले अर्को गज्जब कुरा सुनाए। नागोयाबाट हामीसंगै गएका केहि साथीहरुतिर एकजना ढल्किँदै आएछन् र पार्किङ गरिराखेका, हामी चढेर आएका बसहरुतिर देखाउँदै सोधेछन् "यो कस्को बस हो? किन यहाँ राखेको?"। साथीहरुले "हामी नागोयाबाट चढेर आएका बस हुन्। हलवालाले यहीं राख्नु भनेकोले राखेको हो।" भनेपछि ती मित्र जंगिन थालेछन्, "मेरो गाडी पार्क गर्ने ठाउँ भएन, तिमीहरुलाई बस लिएर आउनु भनेर कल्ले भन्यो----?!" साथीहरुले "बस ल्याउनु-नल्याउनु हाम्रो कुरो हो, तपाईँलाई पार्किङ चाहिने भए हलवालालाई भन्नुस्।" भनेछन्। त्यसपछि ती मित्र "मेरो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, बस राख्ने----?!" भनेर भुन्भुनाउँदै हिँडेछन्। पछि अरुसंग पनि "नागोयाबाट आउनेको 'लिडर' कता छ?" भन्दै हामीमध्येका एकजना साथीको नाम लिएर खोज्दै हिँडेका थिए रे। फेरि पनि निहुँ खोज्न आए अझ 'गतिलो' जवाफ पाउने थिए तीनले, तर त्यो स्थिति आईपरेन। त्यो पार्किङ न त तीनको नीजि थियो, न तीनको नाममा पहिल्यै 'बुक' भएको थियो। पछि थाहा भयो, ती एनआरएन-जापानका अध्यक्ष रहेछन्। तीनको नेतृत्वको 'सक्षमता' त दुई वर्षको कार्यकाल र एकदिनभरिको 'रामलीला'ले देखाएकै थियो, तीनको तुक न तालको बडप्पन पनि देखियो।देशमा राजतन्त्रले गुण्टा कसिकेको छ, तर विदेश बस्ने कतिपय 'नेता' नेपाली भने अझै आफूलाई 'छोटे राजा' संझिन्छन् जस्तो छ!उम्मेदवारी दर्ता र फिर्ताको कार्यक्रम पनि अझै सकिएको थिएन। भित्र हलमा पस्दा सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन आदिमा ‘छलफल’ हुँदै थियो। तर ‘छलफल’को मैले बुझेको सार यस्तो थियो “समयको अभावले गर्दा हामी अहिले यसमा छलफल-विवाद गर्न सक्दैनौं। एउटा कमिटि बनाएर त्यसलाई जिम्मा दिन्छौं, त्यसले अर्को वर्षको साधारण सभामा लानेछ र त्यतिबेलै छलफल गराउनेछ।“ यो त बडो अचम्मको कुरो भयो, यो वर्षको प्रतिवेदनमाथि अर्को वर्ष छलफल गर्ने! अर्को वर्षको कहिले गर्ने नि?!घोषित रुपमा समूहगत उम्मेदवारी थिएनन् तर बेला-बेला हस्तलिखित अथवा छापिएका पर्चाहरु बाँडिइरहेका थिए। तीनमा केहि उम्मेदवारहरुका सूचि हुन्थे र तीनलाई मत दिन आग्रह गरिएको हुन्थ्यो। ती पर्चाहरु त ‘रमाईला’ छँदै थिए, तीनले खडा गरेका विवाद र ‘हा—हू’ झन ‘रमाइला’ थिए। यस्तो लाग्थ्यो नेपाली राजनीति अचानक टोकियोको मुटुमा आईपुगेको छ। उता हल बाहिरको मानव समुन्द्र झन विशाल हुँदै थियो। तह नलागेको भिड देखेर हल र पुस्तकालयका जापानी कर्मचारीहरु निराश देखिन्थे। भिडसंगै स्वाभाविक रुपमा फोहर पनि बढिरहेको थियो। कागतका टुक्राहरु, क्यानहरु, पेट बोटलहरु र चुरोटका ठुटाहरु देखिन्थे जताततै। 'स्वनामधन्य' नेपालीहरु ती चीजहरु फाल्न नजिकैका ढ्वाङहरुसम्म पुग्ने 'पाउकष्ट' पनि गरिरहेका थिएनन् र जता बसेर 'हजम' गरेको हो, त्यतै मिल्काइरहेका थिए। हामी नेपाली जति वर्ष विदेश बसेपनि हाम्रो स्वभाव फेरिन्न, विशेष गरी नेपालीको जमघटमा त हामी उही पूरानै 'भान्छाको फोहर झ्यालबाट फाल्ने र बाटामा ढल मिसाउने' मार्कामा फर्किन्छौं। हामीले लालू प्रसादको नाम राखेर भन्ने-सुन्ने गरेको जोक हाम्रै लागि चरितार्थ भएको थियो र हामी नेपालीको हातमा परे जापानलाई एक दिनमै नेपाल बनाइदिन सक्छौं भन्ने कुराको बलियो प्रमाण पेश भएको थियो।(मैले क्यामेरा बोकेको थिईँन, तर ब्लगको लागि भनेर मोबाइललेनै भएपनि केहि फोटोहरु खिचेको थिएँ। समयाभावका कारण अहिले राख्न सकिँन, क्षमाप्रार्थी छु। ती फोटोहरु र बाँकी विवरणका साथ अर्को भाग लिएर चाँडैनै आउनेछु।)अरु भागहरु:भाग-१भाग-२भाग-४
I just happened to see it being highlighted at the side bar, while checking mails early in the morning. I talked with one of my friends about it. According to him, it was already on the TV news last night.One Nepalese 'gentleman', living somewhere in Hokkaido killed his wife,aJapanese citizen and their6months old daughter. This cold blooded murderer then dumped his daughter's body in the river. According to the news, the lady wanted divorce from him. This will surely giveavery bad name to Nepal and Nepalese for many years. Any crime is bad and murder for any reason is worst. The last such case was more thanadecade ago. I hope this murderer will get the maximum possible punishment.Though crime in Japan is not by foreigners only, Japanese generally blame foreigners for recent increase in crimes. Foreigners of almost all origins are found involved in criminal activites but people from the third world countries are behaved more suspiciously.A few days from now will be pretty uneasy for us too. People will certainly mention this in conversations.I pray for peace to the souls of mother and daughter. Man held on suspicion of killing wife, baby daughter missing
एन.आर.एन को अधिवेशन जात्रा:राष्ट्रियताको घोर बेइज्जतीको एक दिन-२
ठीक दश बजेको थियो फर्केर आइपुग्दा। कार्यक्रमको तयारी बल्ल शुरु हुन थालेको थियो। दश बजे शुरु हुने कार्यक्रमको स्टेज आदिको तयारी त दश बजेबाट नभई अलि पहिलेनै हुनुपर्ने होईन र? हामीलाई गलत समय भनिएको रहेछ कि? पछि उपलब्ध गराईएको कार्यक्रम तालिकामा एघार बजे भनेर लेखिएको रहेछ। लेख्न एघार लेखेपनि शुरु हुँदा बाह्र बज्न आँटिसकेको थियो। तर दशबजेको उपस्थिति हेर्दा कार्यक्रम शुरु हुने भनेर तोकिएको समय दश बजेनै हो भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो। कार्यक्रम ढिलो सुरु हुनुको कारण बुझ्दा अनौठा कुराहरु सुनिए। कसैले भने “केहि उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएर सर्वसम्मत बनाउन हिजो साँझदेखि बिहानसम्म ‘कसरत’ र ‘चलखेल’ गर्नु परेकोले कार्यक्रम ढिला हुन गएको हो।“ गज्जब छ बा! ठीक छ ‘कसरत’ र ‘चलखेल’ त नेपाली भएको संगठनमा नहुने कुरै भएन, तर सबैका सबै त्यतै लाग्ने भए आयोजक समितिको के काम? ‘कसरत’ र ‘चलखेल’का ‘पेशेवर’हरु त्यता लागेर केहि मान्छे; धेरै पनि पर्दैन, ५-७ जना जति; कार्यक्रमको तयारीमा जुट्नुपर्दैन?! यति सानो ‘बच्काना’ कुरा पनि ठूल्ठूला गुड्डी हाँक्ने एनआरएन-जापानलाई थाहा छैन?!अझ ‘गजब’ कुरो पनि सुनियो। ३ तारीख दिउँसो पाँच बजेसम्म सदस्यता लिएकाहरुले मत दिन पाउने सहमति थियो रे पहिला, तर एक पक्षले पाँच बजेको केहि मिनेटभित्र ल्याएका १५० नयाँ सदस्यता निवेदनले विवाद खडा ग-यो रे! ती १५० जनालाई मत हाल्न दिने कि नदिने भोलि’ भन्ने विवाद सुल्झाउन सबै रातभरि ‘खटेको’ले ढिला हुन गयो रे! यो एनआरएन कस्तो संगठन हो?! यो भन्दा धेरै साना संगठनहरुमा पनि २० घण्टा पहिला सदस्य बनेकै भरमा मत हाल्न पाईँदैन। मत हाल्ने अधिकार पाउन सके एक महिना, नत्र कम्तिमा एक हप्ता पहिला सदस्य बनेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्थ्यो। मलाई थाहा छैन, एनआरएन भनिने नौटंकी संस्थाको विधानमा यो कुरा छ कि छैन। अथवा विधानै पो छैन कि के थाहा? विधान भएको संस्था पनि यति गाईजात्रे हुन्छ?!पढ्दै जानुस्, यो भन्दा ‘आश्चर्यजनक’ कुराहरु फेला पार्नुहुनेछ। एनआरएन-जापानको माध्यमबाट तपाईँलाई भरपूर ‘मनोरञ्जन’ दिनु मेरो एकमात्र उद्देश्य हो!:)कति उभिने भनेर भित्र हलतिर पसियो एकछिन बस्नु प-यो भनेर। लगभग साढे चार सयजति अट्ने हल थियो। बाहिर अहिलेनै ७-८ सयको भिड भईसकेको थियो। हिजोसम्मको सदस्यता संख्याले १८०० नाघिसकेको थियो रे। सदस्य संख्यानै १८०० भएपछि हल पनि कम्तिमा ११-१२ सय अट्ने चाहिन्न र? पछि आयोजकहरुसंग कुरा गर्दा यस्तो जवाफ पाईयो, “यो हल ४-५ महिना पहिलेनै बुक गरिएको हो। त्यो बेला दर्ता सदस्य संख्या ४००जतिमात्रै थियो। अहिले अचानक सदस्य संख्या बढ्यो तर अर्को ठूलो हल लिन असाध्यै महंगो परने भएर लिइएन।“ मौका पाए पूरै नेपाललाई सुनको जलप लाईदिन्छौं भनेर ‘खोक्ने’हरुले यस्तो कुरा गरेको अलि सुहाएन। पैसा मनपरी खर्च गर्ने भनेको होईन तर १५ सय जनाको भिड जम्मा हुने जान्दा-जान्दै त्यति सानो हललेनै काम चलाउन खोज्नुजस्तो मूर्खता र गैर-जिम्मेवारीपन के हुनसक्छ।कार्यक्रम कतिखेर शुरु हुने हो थाहा छैन, बाहिर मान्छेको भिड बढेको-बढ्यै छ। विशाल भिड जम्मा भएको देखेर जापानीहरु छक्क परेर हेर्दैछन्। हलसंगै जोडिएर रहेको पुस्तकालयमा आउने-जाने जापानीहरुले बाटो पाएका छैनन र ‘के भएको हो!’ भनेर अल्मलिएका छन्। न स्वयंसेवकहरु यथेष्ट थिए, न भएकाकोनै गतिलो ब्यबश्थापन थियो। यस्तो रमिता जापानीहरुले जिन्दगीमा कहिल्यै देखेका थिएनन् होला।अरु भागहरु:भाग-१भाग-३भाग-४
मलाई यो एन.आर.एन भनिने संस्थाको बारेमा धेरै चासो छैन पहिल्यैबाट। यसबारेमा राम्रा धारणा त्यति थिएनन् अहिलेसम्म तर असाध्यै 'खत्तम' पनि लाग्दैनथियो।आफ्नो वचन पूरा गर्दा रहेनछन् यसका हर्ताकर्ताहरु भन्ने कुरा यो संग जोडिएको पहिलो अनुभव हो। म यसको सदस्य बनेको डेढ वर्षजति पहिला हो। एनआरएन सदस्यताको परिचयपत्र दिने, इ-मेल सूचि बनाएर सबै सदस्यहरुलाई बिभिन्न गतिविधिहरुको बारेमा अद्यावधिक सूसूचित राख्ने आदि कुराहरु सुनाईएको थियो त्यो बेलामा। तर न परिचय पत्र आयो, न एउटा इ-मेलनै आयो एनआरएनको। अब इ-मेल सूचि बनेर पनि मैमात्र छुटेको त पक्कै होईन होला। गज्जब त के छ भने एनआरएन सदस्यताको परिचयपत्र बोकेबापत पाईने बिभिन्न 'सुविधा' र 'छुट'हरुको भने जताततै भरमार विज्ञापन गर्छन् उनीहरु। एकमहिना जति पहिला नागोयानजिक एनआरएनको तोकाई शाखाले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। त्यहाँ उपश्थित एनआरएनका 'अन्तर्राट्रिय नेता' एकजना र 'राष्ट्रिय नेता' एकजनालाई फेरि सम्झाएको थिएँ मैले (अरु 'स्थानीय नेता'हरुलाई पनि भेटेपिच्छे सम्झाउँछु म!)। उनीहरुले "हेर्नुस् वसन्तजी, कत्रा-कत्रा ठूला समस्या त समाधान हुन्छन्, यो त सानो समस्या हो। हामी मिलाईहाल्छौं नि----।" भन्दै एक राउण्ड गीता-दर्शन सुनाएका थिए मलाई। कुरो गराइबाटै थाहा हुन्थ्यो कि केहि हुनेवाला छैन। र भएन पनि। अस्ति चार तारीखका दिन टोकियोमा एन.आर.एन-जापानको राष्ट्रिय अधिवेशन थियो र नयाँ कार्यसमितिको चयन पनि हुनेवाला थियो। जापानमा जहाँ बसेको भएपनि मतदान गर्न टोकियोनै जानुपर्ने बाध्यता थियो। नेपाल सरकारसंग ‘विदेश बसेकाले विदेशबाटै भोट हाल्न पाउनुपर्छ---‘ भनेर ‘हक’ मागेको नाटक गर्ने एन.आर.एनको आफ्नो चुनावमा भने भोट हाल्न टोकियोनै पुग्नुपर्ने ‘नियम’ खडा गरेर एन.आर.एनले आफ्नै धज्जी उडाइरहेको थियो। हुलाक मतदान अथवा इण्टरनेट मतदानको सजिलै ब्यबश्था गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि जापान जस्तो भरपर्दो हुलाक प्रणाली र उच्च प्रविधिमय देशमा। तर एन.आर.एन. प्रविधिलाई बुझ्ने हिसावमा अझै २५ वर्षजति पछाडिनै छ भन्ने प्रमाणित भयो यसबाट। दोश्रो, टोकियोको एउटा सीमित समूह एन.आर.एनको नेतृत्वमा टोकियोबाहिरका कसैलाई पनि ‘छिर्न’ दिन चाहदैंन भन्ने पनि स्पष्ट भयो।अरु बेला भए म कदापि जाने थिईँन। केहि साथीहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। साथीहरु नेतृत्वमा आएभने केहि सकारात्मक परीवर्तन गर्न सक्लान् एन.आर.एन. भित्र र एन.आर.एन. अलि ‘विकेन्द्रित’ पनि होला भन्ने आशा राखेर टोकियो जाने निर्णय गरें। साथै, यहि मौकालाई उपयोग गरेर केहि नयाँ चिनजानको शुरुवात र पूराना चिनजानहरुको नवीकरण पनि गर्न सकिने देखें। नागोयाबाट जान दुई बसको ब्यबश्था गरेका थिए साथीहरुले। राती १२ बजे बस हिँड्ने बेला हुँदासम्म ब्यबश्थापनमा लागेका साथीहरुको अनुहारमा चिन्ता छाउन थालिसकेको थियो। सिटले धान्ने भन्दा बढी मान्छे छिरिसकेका थिए बसभित्र र हामामाचु र शिजुओकाबाट टिप्नुपर्नेहरु अझै बाँकीनै थिए। यस्तै छ हामी नेपालीहरुको बानी। दुई घण्टा अगाडिसम्म ‘जान्न’ भनको मान्छे बस हिँड्नेबेलामा लाजै नमानी टुप्लुक्किदिन्छ। अब ‘लान्न तँलाई, फर्केर जा---‘ भन्नुभएन, त्यो पनि चुनावको मुखैको ‘मतदाता’संग!जापानी चालकहरुले मान्ने थिएनन् यसरी मान्छे कोचीकोची उभ्याएर लान, तर यसपालीका ‘गुरुजी’ हरु अलि सोझै परेछन्। रिसाई-रिसाई भएपनि राजी भए गाडी हाँक्न। प्रहरीले ध्यान दिने ठाऊँमा सबै भुईँमै भएपनि बसिदिने र झ्यालका पर्दा लगाइदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए उनीहरुले। तर पक्का ‘नेपाली बानी’को अगाडी यी त साना समस्याहरु रहेछन्। पछाडि बस्ने १५-२० जनाहरु यति पत्रु र गएगुज्रेका रहेछन् कि म बसेको गाडीका चालकले ’३५ वर्षको चालक जीवनमा यति असभ्य यात्रुहरु कहिल्यै देखेको थिईँन!” सम्म भने। उनीहरु रक्सीले मातेर असाध्यै हल्ला गरिरहेका थिए, त्यो पनि बेला-बेलामा माईकै समाएर। ‘हल्ला नगर’ भन्दा उनीहरुले मानेनन् बरु झगडाकै मूडमा आउँथे सजिलै। बियर खाएर क्यान बसभित्रै गुडाइदिने, क्यान अथवा कप झ्यालबाट बाहिर फाल्दिने पनि गरिरहेका रहेछन् उनीहरुले। नेपाल र नेपालीको बेइज्जतीको यो क्रम बिहान ४ बजेतिर आएर सबैलाई रक्सीले ‘लडाइसकेपछि’ मात्रै रोकिएको थियो। आएकोमा पश्चाताप लाग्न शुरु भइसकेको थियो मलाई। लाग्यो, नेपाल सरकारले एक महिना जति थुनेर बानी-ब्यहोरा र सभ्य आचरण नसिकाई कुनै पनि नेपालीलाई पासपोर्ट दिनुहुँदैन। (तर सरकार आफैं सभ्य हुनुप-यो नि पहिला त, हैन र?!)एकजना कलाकार साथी थिए अगाडि। लोकगीत-संगीतमा सिपालु छन् तिनी, पहिला पनि केहि कार्यक्रममा तीनको प्रतिभा देख्ने मौका पाइएको थियो। तिनले रातभरि बाँसुरी बजाएर बस्न दिएका हैनन् अर्कोतिर! साथीले एक दर्जन जति बाँसुरी ल्याएका रहेछन् र १०-१५ मिनेटमा फेरी-फेरी बजाउँथे। ठीक छ तीनले बाँसुरी राम्रो बजाउँछन्, तर ५-६ घण्टासम्म एकोहोरो बाँसुरी सुनिरहनुपर्दा के हुन्छ मान्छेलाई?! त्यो पनि रातभरि अनिदो हुनुपरेको बेलामा! बिहान आठ बजे मेगुरोको कार्यक्रम स्थलमा पुग्दा आयोजकहरु हुने कुरै भएन, कार्यक्रम दश बजेबाट शुरु हुने भनेर भनिएको थियो हामीलाई। त्यता हल्लेर दुई घण्टा बिताउन त्यति सजिलो नहुनेनै भयो, फेरि नित्यकर्मको कुरा पनि छँदै थियो।अरु भागहरु:भाग-२भाग-३भाग-४